Eminye iPalma de Mallorca, iGran Canaria, iFuerteventura, iMalaga kunye neenqwelomoya zeSeville eLufthansa ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Eminye iPalma de Mallorca, iGran Canaria, iFuerteventura, iMalaga kunye neenqwelomoya zeSeville eLufthansa ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iindawo ezibaluleke kakhulu zeholide zaseYurophu ngoku ziya kubonelelwa ngaphezulu kwe-80 yeenqwelomoya ezisuka eFrankfurt Rhein-Main Airport nangaphezulu kwama-50 eenqwelomoya ezivela eMunich.
ILufthansa yongeza iindiza ezili-130 ezongezelelekileyo ezisuka eFrankfurt naseMunich ukuya kwiindawo ezithandwayo zeholide zaseYurophu.
ILufthansa ibhengeza ukwanda kohambo lwasekhaya ukusuka eFrankfurt ukuya eBerlin, Hamburg, eMunich naseMunich ukuya eBerlin, Hamburg naseDusseldorf.
Ukuqala ngo-Okthobha kuya kubakho unxibelelwano lweentsuku ezilishumi elinanye ukusuka eFrankfurt ukuya eBerlin endaweni yodibaniso lwemihla ngemihla elithoba.
Ibango eliphezulu leenqwelomoya kwiindawo zokuzonwabisa ziyaqhubeka ukuya kwiiholide zekwindla ezizayo. Emva ko-Agasti, u-Okthobha ubonakalisa ukonyuka okuphezulu kokubhukisha kwindawo enelanga, iindawo zaseYurophu. Nje ngeziphumo, Lufthansa Yandisa inkqubo yayo yenqwelomoya kwiindawo ezifudumeleyo ezinelanga ngakumbi.
Lufthansa Iindawo zokuya eSpain zibaluleke kakhulu. Ke ngoko, inqwelo moya ngoku ibonelela ngeenqwelomoya ezongezelelweyo Palma de Mallorca, IGran Canaria, iFuerteventura, iMalaga kunye neSeville. IPortugal, i-Itali neGrisi zihlala zithandwa kakhulu. ILufthansa ke inikezela ngeenqwelomoya ezongezelelweyo kuFaro naseMadeira (zombini iPortugal), kunye neCagliari eSardinia, eCatania eSicily, naseRhodes (eGrisi) ngexesha lekhefu.
Xa kucwangciswa, abahamba ngenqwelo moya kufuneka bahlale begcina imigaqo efanelekileyo yokungena kunye neyokungeniswa.
Ukongeza, imfuno yohambo lomoya iyaqhubeka nokukhula ngamandla kukhenketho lweshishini. Lufthansa Iya kuthi ke ke iqhubeke nokwandisa ukunikezela ngenqwelomoya ekhaya ngeendlela ezibaluleke ngokukodwa kubahambi beshishini. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, inqwelomoya yayisele izandisile iinkonzo zayo ngo-Okthobha ngeepesenti ezingama-45 kwiindlela ezisuka Frankfurt ukuya eBerlin, Hamburg, eMunich nokusuka eMunich ukuya eBerlin, Hamburg naseDusseldorf, xa kuthelekiswa noJulayi.
Ngoku, unxibelelwano olongezelelweyo lunikezelwa ngesaziso esifutshane. Oku kuthetha, phakathi kwezinye izinto, ukuqala ngo-Okthobha kuya kubakho unxibelelwano lweentsuku ezilishumi elinanye ukusuka eFrankfurt ukuya eBerlin endaweni yothungelwano lwemihla ngemihla.
Ngapha koko, kuya kubakho iinqwelomoya ezilishumi ukusuka eFrankfurt ukuya eHamburg endaweni yokuqhagamshela imihla esibhozo. Imeko iyafana neMunich: Endaweni yonxibelelwano lwemihla ngemihla, ishedyuli yenqwelomoya evela "kwi-MUC" iya kubandakanya ukuya kuthi ga kwithoba lemihla ngemihla ukuya eDusseldorf ukuqala ngo-Okthobha.
Kwakhona, ngokwandisa ishedyuli yenqwelomoya, unxibelelwano ngakumbi ngoku luyafumaneka imini yonke. Abahambi abasoloko befuna ukubhabha kusasa okanye ngorhatya ngoku banokuzuza kuphuculo lwendiza.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 22
Usetyenziso olungakumbi nge- umfanekiso